कुखुरामा कर ः पर्यटक रोयल्टीमा हल्ला ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कुखुरामा कर ः पर्यटक रोयल्टीमा हल्ला !
२०७१ पुष ८, मंगलवार ०५:०४ गते
चितवन जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक आयस्रोत निकै कम छ । केन्द्रीय अनुदानमा निर्भर हुनुभन्दा स्थानीय स्रोतबाट आर्जन गर्नु स्थानीय निकायका लागि हितकर हुन्छ । जिल्लाको आयस्रोत बढाउने विषयमा सबैको चासो आवश्यक छ । आयस्रोत के–के हुन सक्छन्, सबैको खोजी हुनुपर्छ । कानुनअनुसार त्यसमा कर लगाएर जिविसले आम्दानी बढाउन सक्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले यो अधिकार दिएको छ । चितवनमा अहिले धेरै आय हुने दुईवटा स्रोत फेला परेको छ । एउटा हो, पर्यटक रोयल्टी र अर्को हो, कृषि उपज ।
चितवनलाई कुखुरा व्यवसायको राजधानीका रुपमा चिनिन्छ । देशभर लगभग ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी यो व्यवसायमा छ, जसको ५० प्रतिशत चितवनमा नै लगानी भएको छ । त्यसैले, यो जिल्लाको ठूलो कृषि उद्यम हो । यो कुरा स्वीकार गर्न कुखुरा व्यवसायीहरु पनि हिचकिचाउँदैनन् । अनि, पर्यटन यहाँको पहिचान नै हो । चितवनलाई देश–विदेशमा चिनाउने क्षेत्र नै पर्यटन हो । यहाँ वर्षमा डेढ लाख, पौने दुई लाखको हाराहारीमा पर्यटकहरु आउँछन् । तर, कुखुरा होस् या पर्यटक, जिविसलाई राजस्वबापत् सुको आउँदो रहेनछ ।
लगभग अढाई वर्षअघिको कुरा हो, त्यो बेलामा जिविसमा स्थानीय विकास अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला थिए । उनको पालामा कुखुरामा कृषि उपज कर लगाउने जिल्ला परिषद्ले निर्णय ग¥यो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले जिल्लामा उत्पादन हुने र उत्पादन भएर बाहिर जाने कृषि उपजमा कर लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ भन्ने आधारमा त्यो निर्णय भएको थियो । त्यसरी लिने वस्तुमा करको निर्धारण जिल्ला परिषद्ले गर्ने छ । कर लगाउँदा त्यो क्षेत्रका वस्तुगत संघ, संगठन र व्यवसायीसँग सहमति गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
जिविसले कुखुरा, चल्ला र अन्डामा लगाउन खोजेको कृषि उपज कर व्यवसायीहरुले भने नतिर्ने घोषणा गरे । जिविसलाई कुखुरा व्यवसायी मञ्चले व्यवसाय घाटामा गएको हुँदा कर तिर्न नसक्ने लिखित जानकारी गराए । यसका साथै कुखुरामा कर लगाउन ऐनले नै नदिने कुखुरा व्यवसायी मञ्चका पदाधिकारीहरुको जिकिर छ । चितवन जिल्ला परिषद्ले बिक्रीका लागि लैजाने ज्यूँदो कुखुरामा प्रतिगोटा एक रूपैयाँ, प्रतिचल्ला २५ पैसा र ३० वटा अन्डा रहने क्रेटमा प्रतिक्रेट २० पैसा कृषि उपज शुल्क लिने निर्णय गरेको
थियो । परिषद्को निर्णयपछि जिविसले सम्बन्धित व्यवसायीसँग तीनपटक छलफल गर्दा पनि सहमति हुन सकेन । सहमति नभएपछि जिविसले मात्रै एकतर्फी कर लगाएर उठाउन कानुनले नै दिँदैन ।
कुखुरा व्यवसायीले शुल्क नतिर्ने भएपछि फलफूल, तरकारी उत्पादकहरुले पनि शुल्क नतिर्ने भए । यसका कारण जिविसले तरकारीबाट आउने थप ५० लाख रूपैयाँ राजस्व गुमायो । चितवन जिविसले आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा तरकारीमा लगाएको कृषि उपज शुल्कबाट ५० लाख रूपैयाँ उठाएको थियो । कुखुरा व्यवसायीले नतिरेपछि अरुले पनि तिरेनन् । कर लिन सकिने कृषि उपज धेरै छन्, तर सबैले कुखुरामा पहिला लगाऊ हामी पनि तिरौँला भनेकाले जिविसले अरुबाट पनि अहिलेसम्म कर उठाउन सकेको छैन । चितवनले देशको कुल कुखुराजन्य व्यवसायको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । कुखुरा, चल्ला र अन्डामा शुल्क लिँदा चितवन जिविसलाई वर्षमा डेढदेखि दुई करोड रूपैयाँ राजस्व उठ्ने अवस्था रहेको तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी बास्तोलाले त्यो बेलामा बताएका थिए । उनी चितवन हुँदासम्म यो विषय चर्चामा थियो । तर, उनी सरूवा भएर गए अनि कुरा हरायो ।
अहिले स्थानीय विकास अधिकारी छन्, भरतमणि पाण्डे । उनी चितवनकै बासिन्दा हुन् । चितवनमा स्थानीय विकास अधिकारी भएर आएपछि उनी पनि स्रोत खोज्न तल्लीन छन् । कसरी जिविसको आय बढ्छ भन्ने चिन्ता राख्ने त्यस्ता व्यक्ति पाउनु राम्रो नै हो । तर, कुखुराको करको विषय कागजमै सीमित राखेर पाण्डेले नयाँ स्रोत बाहिर ल्याए । त्यो हो, पर्यटक रोयल्टी । चितवन निकुञ्जले पर्यटकहरुबाट वर्षमा २४ करोड रूपैयाँ उठाउन थाल्यो । तर, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा नै व्यवस्था भए पनि जिविसमा एक सुको रोयल्टी नआउँदो रहेछ । यो रकम उठाउने प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयसम्म टोली पुग्यो । जे होस्, अहिले जिविसको पक्षमा माहौल बनेको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार ३५ प्रतिशत रोयल्टी जिविसले पाउनु पर्ने हुन्छ । निकुञ्जको आम्दानीको विषयमा अर्को भुल्न नहुने विषय के हो भने विसं २०५४ सालदेखि नै ५० प्रतिशत स्थानीय तवरमा नै खर्च हुँदै आएको छ । निकुञ्जका जनावरहरु आएर धेरै दुख्ख दिने, बाली खाने, मान्छेलाई आक्रमण गरेर ज्यानै लिनेसम्मका घटनाहरु गराउने निकुञ्जसँग सिमाना जोडिएका गाउँहरुमा मध्यवर्ती समूह समितिहरु छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार बनेका यी समूह समितिहरुले ऐन नियममा व्यवस्था भएअनुसार नै निकुञ्जबाट आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम पाउने गरेका हुन् ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार रोयल्टी जाँदा अब कसरी जाने भन्ने प्रस्ट छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा चितवनसहित नवलपरासी, मकवानपुर र पर्सा जिल्लाका ४५ हजार घरधुरी बसोवास गर्छन् । त्यसैले, उनीहरुका लागि यो चासोको विषय हो । निकुञ्जले मध्यवर्तीमा जाने ५० प्रतिशत बजेट यता–उता नगर्ने अडान लिएको छ । कुल आम्दानीमध्ये मध्यवर्तीमा जाने ५० प्रतिशत रकम कटाएर जुन बाँकी हुन्छ, त्यसबाट रोयल्टी दिन निकुञ्ज प्रशासन लचिलो छ । तर, खासमा रकमको बाँडफाँड के–कसरी हुनुपर्ने हो, जिविस खुलेर आएको छैन । मध्यवर्तीमा गएर बचेको रकमको ३५ प्रतिशत आए पनि ठिकै हुन्छ भन्ने सोचमा जिविस पनि रहेको बुझिन्छ । अहिलेको आम्दानीको तहअनुसार यसरी पनि जिविसले तीन करोड रूपैयाँको हाराहारीमा रकम पाउने छ । अर्थात्, कुखुरामा कर लगाउन खोज्दा आउने हाराहारीमा र त्योभन्दा बढी नै राजस्व पर्यटक रोयल्टीबाट आउने देखिन्छ ।
यहाँसम्म हेर्दा सबै कुरा सामान्य नै छ । जिविसले मध्यवर्तीका सम्बन्धमा प्रस्ट धारणा बनाए उत्तम हुन्थ्यो भन्ने आग्रहसम्म गर्न सकिन्छ । तर, अलि नसुहाएको कुराचाहिँ चितवन उद्योग वाणिज्य संघको ४८औँ साधारण सभामा संघका अध्यक्ष कल्याण जोशीले उठाएको प्रसंग हो । जिविसले पर्यटक रोयल्टीका बारेमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम ३५ प्रतिशत हिस्सेदारी खोजेको छ । तर, उवा संघ अध्यक्ष जोशीले साधारण सभाको आफ्नो लिखित भाषणमा पर्यटन करको ५० प्रतिशत रकम जिल्ला विकास समितिमा निकासा गर्न अर्थमन्त्री रामशरण महतसमक्ष आग्रह गरे, उदेक लाग्दो कुरोचाहिँ यो हो । मध्यवर्तीमा विसं २०५४ सालदेखि जाने गरेको ५० प्रतिशत रकमका बारेमा उवा संघ अध्यक्षको आपत्ति हो ? नभए जिविसले ३५ प्रतिशत माग गरेको ठाउँमा जोशीले १५ प्रतिशत थप केका लगि मागेका हुन् ?
पर्यटक रोयल्टीबापत्को भन्दा १५ प्रतिशत बढी रकम जिविसका लागि माग गर्न उवा संघ अध्यक्ष उत्प्रेरित हुनुको रहस्य के हो ? स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले पनि जवाफ दिनुपर्छ । किनभने, पर्यटक रोयल्टीकै हाराहारीमा राजस्व उठ्न सक्ने कुखुराको करको विषयमा भरतमणि पनि चुप छन् । उवा संघका कुखुराजन्य व्यवसायसँग सम्बन्धितहरुको बाहुल्य छ । साधारण सभामा भने यो व्यवसायमा लागेको करका बारेमा कोही बोलेनन् ।
स्थानीय विकास अधिकारीलाई राजस्वको ठुलो चिन्ता हो कि सजिलोसँग राजस्व आउँछ भने लिन खोजेको मात्रै हो ? यदि राजस्वको चिन्ता हो भने व्यवसायीहरुको त्यत्रो मञ्चमा पाण्डेले कुखुराको करसँग सम्बन्धित विषय उठाउनै पर्दथ्यो । कुखुराको कर जायज होइन, कानुनी रुपमा पनि लिन मिल्दैन भन्ने व्यवसायीहरुको जिकिर छ । यदि त्यस्तो हो भने उवा संघ अध्यक्षले यो विषय साधारण सभामा जोडतोडका साथ उठाउनु पर्दथ्यो । तर, निकुञ्जको आम्दानीका विषयमा सन्दर्भभन्दा पनि बाहिर गएर बोल्ने अध्यक्ष जोशी यो विषयमा ‘चुँ’ बोलनन् । स्थानीय विकास अधिकारीले पनि ‘क’ सम्म उच्चारण गरेनन् । यो तैँ चुप मै चुप किन ?
साधारण सभामा उवा संघ अध्यक्ष जोशीले बोलेको बोलीले जनावरको आक्रमण सहेर कष्टकर रुपमा मध्यवर्तीमा बस्दै आएका चार जिल्लाका हज्जारौँको मनलाई सशंकित बनाएको छ । मध्यवर्तीमा जनावरले आक्रमण गर्दा हरेक वर्ष १५÷२० जनाको ज्यानै जान्छ । ४०÷५० जना घाइते हुन्छन् । तीमध्ये केही अपाङ्ग भएर पीडामा जीवन गुजार्न पर्ने अवस्थामा पुग्छन् । सयौँ बिघाको बालीनाली सखाप हुन्छ । सयौँ घरपालुवा जनावरहरु बाघ, चितुवाका आहारा हुन्छन् । हो, यस्ता जनता बस्ने क्षेत्रमा कानुनअनुसार जाने बजेटका विषयमा उवा संघ अध्यक्षले बनाएको धारणा के हो ? उवा संघ अध्यक्षको धारणाअनुसार भयो भने मध्यवर्तीमा असन्तोष बढ्ने छ । त्यो असन्तोषले प्रशासन र स्थानीयबीचमा द्वन्द्व बढाउने छ । यसको असर संरक्षणमा पर्ने छ ।